Ụbọchị My Pet » Ihe ọ bụla na-Zere on Mbụ Ụbọchị
emelitere ikpeazụ: oké osimiri. 30 2020 | 4 min agụ
Mbụ ụbọchị nwere ike ịbụ na egwu maka ma ndị ikom ma ndị inyom, karịsịa mgbe ọ na-abịa na-eme na ezi mbụ echiche. Mgbe gị mbụ ụbọchị ga-abụ na ọtụtụ gaa na-enweghị a oma mgbe unu na, e nwere ihe ụfọdụ ọ bụla na-agaghị eme mgbe na-ewere a nwaanyị maka a mbụ ụbọchị.
Adịghị Ever Gosi Up mbubreyo
ỊBỊA ihe a mbụ na ụbọchị bụ onye zuru kwesịrị. -Egosi n'elu aka gị ụbọchị mbubreyo ga-enye gị ụbọchị na-ezighị ezi. Ọ pụrụ iche na ị bụ mgbe niile tardy, ka unu ghara ịma ezu banyere ya na-egosi elu na oge, ma ọ bụ, ruo mgbe i ruru, ọ nwere ike iche na e biliri. Otu ọ dịla, ọ na-aghaghị etinye ya ihe a ọjọọ na ọnọdụ na nwere ike inye a gbara ụka edeturu mmalite nke gị ụbọchị. Ọ bụrụ na ị nwere na-egosi elu n'oge n'ihi agha-agaghị emeli, jide n'aka na ị na-akpọ gị ụbọchị ikwe ka ọ mara ma ọ bụ, ma ọ bụrụ na otu onye n'ime unu adịghị nwere a ekwentị, -akpọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ọmụmụ ihe ahụ mere na ha nwere ike ka ya mara.
Adịghị Gosi Up Disheveled na unyi
Ọ dị mkpa nye onwe gị oge zuru ezu tupu ụbọchị freshen elu na anya gị mma. Ọ bụrụ na ị na-egosi na a mbụ ụbọchị achọ shaggy, unkept, na esi ísì funky, gị ụbọchị ga--ezighị ezi banyere gị. Gị ụbọchị nwere ike iche na i lee otú a mgbe niile ozugbo-agbanyụrịrị. Nye onwe gị ọtụtụ nke oge ahụ n'ụba, kpụọ, ma dee ya uwe gị. Na mmezi ọkara otu awa nwere ike ịbụ na oge ị chọrọ inye onwe gị ihe mara mma ihu gị ụbọchị e achọ, na-echeta, ọ bụghị inwe oge na-kpochara maka a ụbọchị nwere ike ịbụ detrimental ya pụta. A ọma groomed jiri ejiji nke ọma, nwoke ga-emeri n'elu a stinky slob oge ọ bụla.
Adịghị lelee Ndị ọzọ Women n'ihu ya
Mgbe ị na-aga na a ụbọchị na nwaanyị, na i mere mmehie onwe gị ya maka oge nke ụbọchị. N'ihi nke a, ọ bụ nnọọ nke akara na-apụ ndị inyom ndị ọzọ mgbe ị na-a ụbọchị. Nke a bụ mkparị, ọ na-adịghị anabata. Mgbe niile na-adọpụ uche na nwaanyị eje ije site na ndị ga-akacha mee ka gị ụbọchị erughị ala na maa adịghị enye ya echiche na i nwere mmasị na ya. Ọ bụrụ na ị na-mgbe niile na-achọ n'elu ya n'ubu na-ekpo ọkụ keisi ocha na-esote table, otu n'ime ihe abụọ na-fọrọ ekwe nkwa ime: 1) Gị ụbọchị ga-ewute banyere onwe ya, -eche echiche ọ bụ amaghị mma ma ọ bụ achọghị, ma ọ bụ 2) Gị ụbọchị ga-Ezigbo iwe na annoyed na ị, eme ka a ọjọọ mbanye home na a ebelatawo ohere nke a nke abụọ ụbọchị.
Unu ewegharala mkparịta ụka
Mgbe on a mbụ ụbọchị, ị pụrụ iche na mkpa igosi gị nwa agbọghọ na akụkọ na-akpali tidbits banyere gị. Nke ahụ mara mma, ma unu adịghị abanye n'ime mmiri. Cheta a na-akparịta ụka bụ n'etiti mmadụ abụọ, bụghị otu onye na-ekwu okwu mgbe ọzọ. Ọ bụ oké echiche ikere òkè ụfọdụ na-akpali akpali akụkọ na echiche na gị ụbọchị, ma jide n'aka na ị na-enye ya oge zuru ezu iji dokwara isonye na mkparịta ụka. Na-ajụ ya ajụjụ banyere onwe ya, a ga-egosi ya na ị nwere mmasị banyere ya dị ka onye ma ga-enye gị ohere iji mụtakwuo banyere ya.
Adịghị wain na mkpesa
Ee, anyị nile nwere anyị ọjọọ ụbọchị, ma a ụbọchị (karịsịa a mbụ ụbọchị) bụ bụghị ebe ikuku niile nke gị kwupụta iwe. Ohere inweta bụ, gị ụbọchị na-atụ anya na-enwe ezi, fun oge mgbe ọ hụrụ na gị na. Ọ bụrụ na ọ na-kelee na a 'gosh okporo ụzọ e dị otú ahụ a painÖI asì a townî ọ ga-ozugbo-agbanyụrịrị. Mkpesa tent ụda maka a na-akpata nchekasị, enweghị obi ụtọ na ụbọchị. Ọbụna ma ọ bụrụ na i nwere a-agwụ ike n'ụbọchị, adịghị anọ ọnọdụ abalị ịtamu banyere ya. Dị nnọọ inwe obi ụtọ na-anọkọ na nwaanyị i nwere mmasị na. Ọnụ ọchị na-efe efe ma otú ndị frowns. Ma ị maara ya ma ọ bụghị, gị obi adịghị ya mma nwere ike imetụta gị ụbọchị na otú o si ele gị. Ị chọrọ gị ụbọchị icheta gị ka akpa ọchị na upbeat, bụghị a downer.
Adịbigala Ahụ ike ike
Ọ dị ezigbo mkpa na-agụ n'ime n'ókè gị ụbọchị na-enye gị tupu na-aga na n'ihi na a nsusu ọnụ (ma ọ bụ karịa). Adịghị na-akpaghị aka na-eche na naanị n'ihi na unu enwewo ụbọchị na gị ụbọchị dị njikere ime gị na mmekọrịta anụ ahụ na-esonụ larịị. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na-esusu ọnụ gị ụbọchị, malite aka nketa, a ga-amakụ, na ji nwayọọ nwayọọ na-ewuli elu ka a nsusu ọnụ. Mgbe niile na-akwanyere gị ụbọchị chọrọ. Ọ bụrụ na ọ na-ekwu enweghị ka ọ bụla anụ ahụ ọganihu, ewe nzaghachi ya n'ajụghị ase ma o hap. A nwoke bụ oke ike ike mgbe ọ na-abịa mkpakọrịta chiri anya pụrụ ịgakwuru a nwaanyị anya na pụrụ n'ezie ime ka nwaanyị egwu ma ọ bụ na-echegbu onwe.
Adịghị agwa ya Ị ga-akpọ ya bụrụ na unu adịghị bu n'obi na-
Agwa nwaanyị 'Aga m akpọ youî mgbe ị ghara bu n'obi ime otú ahụ adịghị mma. Ọ bụrụ na nwaanyị ahụ nwere mmasị a abụọ ụbọchị na ị, ya mmechuihu ga na-uku ma ọ bụrụ na ọ echere na n'ihi na gị oku naanị ịnụ na ị dịghị mgbe bu n'obi akpọ òkù ka a abụọ ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-achọghị na-akpọ ya, dị nnọọ ejedebe na ụbọchị site na-ekwu 'Ọ dị mma nzukọ unu ma ọ bụ a dị mfe' Good nọrọ nke, nwere ọmarịcha ike nke eveningî. Otú a ị na-agaghị na-eduga ya on ma ọ bụ na-ya na-atụ anya elu. On a agbara dee, ọ bụrụ na ị chọrọ iji ndokwa a abụọ ụbọchị, jide n'aka na ị ka ya mara.
-Eme atụmatụ maka mbụ ụbọchị nwere ike ịbụ akwara-wracking, ma na-eso ndị dị mfe o ụkpụrụ nduzi mgbe na ụbọchị ga-enyere iji hụ na kasị mma ụbọchị kwere omume. Ọ bụrụ na ị bụ enyi na enyi, n'oge, nkwanye ùgwù, na-etinye uche n'ihe, Ohere inweta bụ na ị na na gị ụbọchị ga-enwe a oké oge na, ma ọ bụrụ na mma bụ nkwanyerịta, gị mbụ ụbọchị nwere ike ịbụ mmalite nke a mara mma mmekọrịta.